Magdeline Moyengwa Oenda Kunosimudza Mureza weBotswana kuJapan Olympic Games
Musikana anoita zvemitambo, Magdeline Moyengwa, apinda munhoroondo yekuva munhukadzi wekutanga wechitendero chemapositori kubudirira kuenda kuJapan kumakwikwi e 2020 Olympic Games.
Moyengwa ari kuenda kuJapan akamirira Botswana sezvo ari chizvarwa chenyika iyi.
Moyengwa, uyo ane makore makumi maviri ekuberekwa, inhengo yekereke yeApostolic God’s Church iyo ine muzinda wayo mukuru kwaGandanzara mudunhu reManicaland, anoti chitenderero chake uye kuva munhukadzi hazvimutadzisi kuita mutambo wake wekusimudza masimbi.
Moyengwa anoti akakura asingafarire zvemitambo, asi akazotanga kuita mutambo vekusimudza simbi ava kusekendari paaidzidziswa kusimbisa muviri wake kana kuti physical education.
Paakaudzwa kuti akanga abudirira kuenda kuTokyo, Moyengwa anoti akaita kunge airota.
Amai vemusikana uyu, Amai Erinah Moyengwa, vanoti vakaberekerwa muBotswana makore makumi mana nematanhatu apfuura mumusha weShashe uyo uri pedyo neguta reFrancistown mushure mekunge vabereki vavo vatamira kuBotswana vachibva kuNjanja.
Amai Moyengwa vanoti vari kufara zvikuru nekusimudzirwa kwaitwa dzinza ravo kuburikidza nemwana wavo, uyo achange achisumidza mureza weBotswana kuJapan.
Amai Moyengwa vanoti mwanasikana anofanira kukuridzirwa mune zvaanoda kuita zvinogona kuzumupa raramo yakanaka muhupenyu hwake.
Mutori wenhau dzemitambo kubepanhau reDaily News muBotswana, Annastacia Sibanda, anoti hazvina kumuitira nyore kuti ave mutori wenhau dzemitambo, zvakare ari mwana wemuparidzi.
Sibanda anoti Moyengwa akaratidza kushinga kukuru nokuti mapositori mazhinji ane maonero akasiyana neake pamutambo wake wekusimudza masimbi.
Murairidzi waMagdeline Moyengwa, Alex Rankgwe, anoti ane chivimbo chikuru chekuti Moyengwa achanoita zvisionekwi kuTokyo sezvo ari munhu anokwanisa kutarisana nezvinhu zvaakafanira kuita kunyangwe zvakaoma sei.
Moyengwa ari kutarisirwa kusimuka muBotswana nevamwe vake gumi nevatatu musi wa13 Chikunguru vakananga Tokyo kumakwikwi ari kutanga musi 23 Chikunguru.